Taliye ku-xigeenkii Booliska gobolka Banaadir oo geeriyooday | KEYDMEDIA ONLINE
Sargaal ka tirsan Booliska Soomaaliya, ayaa u geeriyooday dhaawac xooggan oo 9/5/2021 ka soo gaaray qarax nafti-halignimo ah oo ka dhacay Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Alle ha u naxariiste taliye Ku Xigeenkii Qaybta Guud ee Booliska Gobolka Banaadir, Col Axmad Waawayne ayaa u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray qarixii is miidaaminta ahaa ee ka dhacay Saldhiga Waabari, Sagaalkii bishaan.
Afhayeenka Booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay geeridda Sargaalkan, wuxuuna noqonayaa Sargaalkii Saddexaad ee ku geeriyoda qaraxaas, kadib taliyahii Saldhiga Booliiska degmada Waaberi AUN Axmed Baashane oo loo yaqiinay Calooleey iyo Taliye ku xigeenkii qeybta Waliyow Cadde Cabdi Baasid Cabdullaahi.
Col Axmad Waawayne, ayaa lagula tacaalayay Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, tan iyo markii wax-yeelladu soo gaartay, Dowladda Fadaraalku ayaana ka gaabisay in ay u qaado dalka dibaddiisa, si loogu raadiyo adeego caafimaad oo tayo leh.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, oo ka tacsiyeeyay geerida Col Axmad, ayaa yiri, “Allaha u naxariisto Col: Axmed Cabdi (Waaweyne), taliye ku-xigeenkii qeybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii argagixisadu la beegsadeen saldhigga degmada Waaberi. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskiisii & bahda Booliska Soomaaliyeed”.